Torotoro ravina | Fandalinana ny teny Malagasy
Posted on 25 janvier 2008 by avylavitra
Ny arahàba raha toa mahazo làka dia toy ny volamena tsy mba miofo.Koa arahaba Tompokolahy, arahaba Tompokovavy.
Enga anie ny fifampizarantsika toy izao ho toy ny fihaonan’ny farihy manganohano sy ny diavolam-pararàno, ka ny vangiana miramiran-tàva, ny mpamangy kosa e! sariaka lalandàva.
Ny hojerentsika hanombohana azy ity ary dia ny :
Ny torotoro ravina
izy io fifamarafarana ny amin’izay ho fifampitondràna eo amin’ny fanambadiana, na koa amin’ny fisaràhana aza. Dinika tena lava io satria misy fifanarahan’ny roa tonta ao. Miaraka misakafo eo daholo ny fianakaviana roa tonta, ary satria moa tsy nisy ny lovia toy ny amin’izao fotoana, dia ravina mihitsy no solony fahiny. Toro mihitsy noho ny tsaingotsaingoka ataon’ny tànana eo amboniny iny ravina iny amin’ny ankabobeny vao vita ny dinika rehetra.
Tsy maintsy atao anefa ny marimaritra iraisana. Ireto ary ny santionan’ny dinika izay hita mandritra ny torotoro ravina:
1* ny harenan’ny mpivady : zavatra takian’ny andaniny avy any amin’ny zatovovavy any amin’ilay zatovolahy ho harena iombonana entina hiaingan’ny tokantrano, ohatra: omby. Raha tsy misy ny omby dia ondry. Raha tsy misy ny ondry dia akoho mavo. Izay no nahatonga ilay fitenenana hoe : »Sao dia sodokan’ny akanga tsara soratra, ka manary ny akoho mavon-drazana »
2*ny harena maintimolaly : harenan-drangahy na ramatoa manokana talohan’ny nanorenany tokantrano. Nitondra omby ohatra ralehilahy, maintimolaliny. Miteraka olana matetika io resaka maintimolalay io raha sendra misy fisarahana tampoka eo amin’ny mpivady. Niteraka tao anatin’ny fanambadiana anefa ilay omby. Mitaky avy eo ny fianakavian’ny vavy raha sanatria misy tsy fifanarahana, ka miteny fa tsy velona ireo biby raha tsy teo ny zanany vavy nikarakara. Izay no tsy maintsy isian’ny marimaritra iraisana.
Hafatry ny herinandro:
Ny tendrom-po tsy mba nàmana. Raha taitra ny rano mamàky fefiloha, raha mitroatra ny fo mandrava fihavànana, raha henjan-droa ny tady tsy maintsy tàpaka, raha tezitra andriamatoa, mba mamitsaka ramatoa, raha tezitra ramatoa, mba tsy mamàly andriamatoa. Fa raha saro-po manambady e! tonga nenina an-kibo no farany.
(isaorako manokana eto Dadafara Rajaobelison mpanolotra fandaharana ao amin’ny RNM, miaraka amin’i Dany Rabemananjara satria ny maro amin’izay rehetra hasehoko eto dia nalaina avy amin’ny fampianarany daholo, na dia tsy ho izy rehetra aza.
Filed under: teny malagasy | Tagged: fanambadiana, marimaritra iraisana, torotoro ravina |
torotoro ravina (tohiny) »
lova, on 26 janvier 2008 at 15:35 said:
arahaba i avylavitra !
Tokinao, on 26 janvier 2008 at 20:57 said:
Misaotra avylavitra a!
Mba maniry ny hahafantatra ny blaogy sy ireo sehatra rehetra anoratanao eto amin’ny aterineto raha tsy mahadiso ô.
Mahafinaritra tsinona e :-). Sady toa maromaro ihany izy ireo ‘ko.
Afaka alefanao mail amiko, na koa ataonao eto amin’ny toeran’ny commentaire raha mety.
avylavitra, on 28 janvier 2008 at 04:43 said:
Tokinao> http://avylavitra.wordpress.com, tenygasiko.wordpress.com, gazetyavylavitra.wordpress.com ary any amin’ny MalagasyMiray
sipagasy, on 29 janvier 2008 at 18:55 said:
ary handeha alavitra mihintsy i avylavitra @ fitorahana bilaogy annnn